Onyeka Onwenu 20 X 284ml | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Stella Artois 20 X 284ml- Ordrs
Onyeka Onwenu 20 X 284ml
Adịghị ala Lager
Chọta anyị na Instagram, Facebook na Twitter.
Mụtakwuo na www.stellaartois.com ma ọ bụ www.tapintoyourbeer.com
Pịnye: Lager / pilsner
Mmalite: Leuven, Belgium
N'ozuzu echiche: Light uto na a kpọrọ nkụ hoppy imecha
Amụrụ site na afọ 600 nke ịgha mkpụrụ na obodo Leuven nke Belgium, ị nweta uto pụrụ iche nke Stella Artois lager abụghị ihe dị mfe.
Naanị site na iji ọka bali maara nke ọma, European Saaz hops kachasị mma, na usoro ịme biya mara mma nwere ike Stella Artois brewmasters mepụta ụdị elixir ọla edo ka mma nke a ga - echekwa.
Thezọ kachasị mma iji mee nke a? Belzọ onye Belgium, n'ezie: wụsara n'ụzọ zuru oke, si na Chalice, ma nwee ọ enjoyedụ n'etiti ndị enyi na-eji ihe na-atọ ụtọ.
Ihe kacha mma jụrụ oyi na chalice anyị.
Ike nke ukwu, ya na ihe uto ndi ozo sitere na malts na - eme Stella Artois bu biya di omimi mgbe o na - eri nri.
Stella Artois jikọtara nke ọma na salmọn, tuna na anụ marb. Iwe ya na-enye ọdịiche dị mma na mbelata ụtọ na ihendori na carbonation pụtara ya ụzọ abụọ yana nri ọgaranya na eghe, ọ bụrụhaala na ike ha adịchaghị oke.
Azụ Bie Iberibe Azụ na Ibe
E nwere ọtụtụ akwa mmiri na mgbakwunye na Stella Artois na azụ na ibe. Na mbu Stella Artois nwere ike iji ya na ogbo nri, Stella Artois 'carbonation na-agbakwunye ọmarịcha ọkụ na batter yana obere mgbape na flaty nutty na efere.
Ike biya biya ahụ dịkwa naanị na ọkwa kwesịrị ekwesị iji guzogide azụ ahụ egheghị na-ezuru ihe ngosi ahụ ma ọ bụ merie ya, ebe carbonation na-enyere aka mee ka okpokoro ahụ dị ọcha. Obere ihe ifuru sitere na hops na ihe ụtọ ndị fọdụrụ site na malts ga-egwu nke ọma n'akụkụ acidity nke ịpị lemon ma ọ bụ mmanya mmanya nke na-esokarị azụ. N'ikpeazụ, obi ilu dị nro ga-ewepụ ihe ụtọ ọ bụla site na peas ọ bụla na-arụkọ ọrụ n'akụkụ.
Ngwugwu ngwugwu: 5.68l